Ergamaan olaanoon US nageenya biyyattiirratti mariyachuuf Sudaanitti imalaa jiru - BBC News Afaan Oromoo
Ergamaan olaanoon US nageenya biyyattiirratti mariyachuuf Sudaanitti imalaa jiru
Afrikaatti diploomaatota US qabdi jedhamu keessaa tokko nagaa dhabuu Sudaan sababeefachuun torbee kana gara biyyattii akka imalu waajirri haajaa alaa biyyattii beeksiseera a
Dhimmmoota Afrikaarratti garagaaraa barreessan motummaa US Tibor Nagy ''haleellaan namoota nagaarratti raawwatamu akka dhaabatu gafanna'' jedhaniiru.
Dilbata darbe eegalee hojjettootni hiriira bahuun mootummaan waraanaa aangoo qaama hin hidhanetti dabarsee akka kennu dhiibbaa uumutti jiru.
Sudaan hogganaa mormitootaa hiite gadi dhiiste
Guyyaa mormii dursee 'hidhaan jumlaa' gaggeefamaa jira
Hiriira haaraa guyyaa jalqabaa kanaan qaamoleen nageenyaa gaasii imimmaanessuufi rasaasa dhukaasa kan turan yoo ta'u namoonni afur ajjeefamaniirus jedhameera.
Akka waajirri haajaa alaa Us jedhuuttu Nagyiin mariin qaamolee lameen gidduutti eegale akka itti fufu ''qaamoleen lameen haala mijaahaa akka uuman dhiibbaa ni godhu'' jedha.
Diploomaatiin kun Ministira muuummee Abiy kan qaamolee lameen walitti fiduuf hojii jaarsummaatti jiran waliin wal arganiis ni mariyatu jedhameera. Itti aanees gara Mozaambiikifi Afriikaa Kibatti imalu jedhameera.
Wiixani magaala Kaartuum callisaa ta'us manneen daldalaa muraasni banamanii, konkolaattootni muraasniis socho'aa jiru.
Waamicha Waldaan Ogeeyyii Sudaan hojjetaan kamuu hojii akka hin galle dhiyeesse fudhachuun magaala guddittii Kaartuum fi magaalota kaan keessatti manneen daldaaa, Baankiiwwan fi manneen hojii cufaa dha.
Waldaan ogeeyyii kun tibba darbe momitootni nagaan 100 ta'an qaamolee nageenyaan erga ajjeefamanii booda dha lagannaa hojii akka ta'u kan waamicha dhiyeesse.
''Sochiin diddaa uummataa kun Dilbata eegalee yeroo mootummaan uummataa aangoo fudhachuu isaa Televiizhiinii biyyattiirratti dhiyaatee ibsa kennu qofa xumurama'' jedha ibsi Waldaa kanaa.
Sudaan qondaaltota mootummaa duraanii hiite
Sooma ramadaanaa fi mormitoota Sudaan
''Diddaan sochii meeshaalee waraana jaboodha jedhaman jilbeeffachiisu jedha''
Mormiitootni Kaartuum keessatti daandiiwwan cuccuufiifi. Namoonni miidiyaa hawaasummaarratti si'oominaan barreessan ammmoo mootummaan Intarneeta cufuu gabaasaa jiru.
Oduu kan biraan hoogganoonni hidhattootaa sadii magaaliittii keessaa gara Sudaan Kibbaatti deebifamaniiru
Sadeen keessaa tokko Yasiir Amiin ji'a darbe turtii waggaa jahaa booda biyya isaa sudaaniitti kan deebi'e yommuu ta'u bakka hin argamnetti murtiin du'a itti murtaa'ee ture.
Itti aanee maaltu ta'a?
Akka Rooyitars gabaasetti mormiitootni mootummaa ce'umsaa ogeeyyii diinagdee jajjaboo of keessatti hammate ijaaruuf karooratti jiru.
Tokkummaa garee mormitootaa fi dhaabbilee siyaasaa mormituu keessaa nama eenyummaan isaanii akka ifa hin taane gaafatan waabeffachuun ejeensiin kun akka jedhutti Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniitti barreessaa olaanaa Komishinii Diinagdee Afrikaa kan turan Abdullaa Hamduukiin Ministira muummee mootummaa ce'uumsaa gochuun filachuuf akka ta'e gabaaseera.
Dubartoota sadii dabalatee namoota biroo saddeet miseensa mana maree ce'uumsaa ta'aniis filachuuf jedhu jedhameera.
Torbee darbe Ministirri muummee Abiy wayita mariif gara Kaartuum imalanii turan yaaduma kanaan walfakkaatu dhiyeessan: mana maree ce'umsaa miseensota 15 qabuufi saddeet kan qaama militarii keessaa hin taane torbammoo qaama militarii keessaa akka ta'u dhiyeessanii turan.
Waldhabdee Sudaan: Manni Maree Waraanaa qondaaltota mootummaa hidhaa buuse